Erdogan Oo Taageeray Mid ka mid ah Laba Dal Oo Dagaallamaya | Gaaroodi News
Madaxweynaha Turkiga Rajib Dayib Erdogan ayaa Armeniya ugu baaqay iney joojiso qabsashada dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh si ay labada dal xal waara u gaaraan.
Hadalka Edrogan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dagaal laba maalmood oo xiriir ah socdau uu dhexmaray Azarbajaan iyo Armenia, iyadoo colaadda tobannaanka sana soo socotay ay dib ugu soo cusboonaatay gobolka Caucus ee Koonfurta-bari ee Yurub ku yaallo.
Erdogan wuxuu sheegay Armenia oo joojiso damaceeda qabsashada dhulka la isku hayo iyo gobolkaasi oo ay gabi ahaanbab ka baxdo ay tahay waddada keli ah ee ay labada dal nabad ku gaari karaan.
Wakaaladda wararka Turkiga Anadolu waxay sheegtay madaxweyne Erdogan inuu yiri “Turkiga inuu sii wadi doono awood kasta uu leeyahay uu saaxibtinimo iyo walaaltinimaba uu la garab istaago Azarbajaan.
Elnur Civik oo ah la taliyaha Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay inuu Turkiga dalka Azarbajaan oo ay xulafa yihiin uu hill iyo hooba la garab istaagayo.
Dagaal labada dal isniinti dhexmaray ayaa la sheegay iney ku dhinteen tobannaan qof, iyada oo dad malyan kor u dhaafayana ay dagaalladu ku qasbeen iney guriyahooda ka qaxaan.
Mas’uuliyiinta gobolka Nagorno-Karabakh waxay habeennimidi Isniinta sheegeen 26 askari iney dagaalka uga dhinteen taasoo qasaaraha dagaalkaasi ka dhashay ka dhigeyso in ka badan 80.
Dalal badan ayaa walaac aad u weyn ka muujiyey dagaalkan ku soo cusboonaaday labada dal iyada oo ay soo jiiteen quwadaha labadaasi dal deriska la ah sida Turkiga, Ruushka iyo Iiraan.
Dadka deegaanka ayaa gabaad ka dhigtay goobaha bamka looga gabbada oo ku yaalla Stepanakert, caasimadda Nagorno-Karabakh
Waddamadaasina waxay xaaladda gobolka ka soo cusboonaatay u daneynayaan maadaamaa tuubbooyinka saliidda iyo gaaska ee ugu muhiimsan ay dalalkaasi dagaallamaya dhexmaraan.
Dagaalki ugu dambeeyey ee labada dal ayaa Axaddi bilawday, inkasta oo labada dal Azarbajaan iyo Armeniya uu midba midka kale ku eedeynayo colaadda soo cusboonaatay inuu isagu billaabay.
Labada dalna waxay diyaarsadeen ciidamo tira badan iyaga oo meelaha qaar kaga dhawaaqay xaalad dagaal.
Dagaalkan ayaa ah kii ugu cuslaa oo labada dal dhex mara iyada oo dagaal 2016-dii labada dal dhex maray ay ku dhinteen ugu yaraan 200 oo qof.
Dalalka kale maxay khilaafka ka yirahdeen?
Turkiga wuxuu ku dhawaaqay inuu taageerayo Azarbajaan, halka Ruushka oo xaruumo militari ku leh Armenia isla-markaana saaxib la ah Azarbajan uu labada dal ugu baaqay xabbad joojin degdeg ah.
Armeniya waxay Turkiga ku eedeysay iney taageero militari oo toos ah ay siiso Azarbajaan si ay ula wareegto gacan ku haynta dhulka lagu muransan yahay, balse eeddaasi waxaa dhinac isaga dhigay Turkiga.
Waddamada Azarbajaan iyo Armeniya maxay yirahdeen?
Wasiirka arrimaha dibadda Armeniya Zahrab Manatsakanyan oo BBC u warramay wuxuu Azarbajaan ku eedeeyey iney carqaldeysay heshiis nabaded oo horay loo gaaray oo khilaafka xal u ahaa, isaga oo carrabka ku dhuftay Armeniya iney marweliba difaaceyso gobolka.
Afhayeen u hadlay madaxtooyada Azarbajaan oo isna BBC u warramay wuxuu sheegay inuu dalkiisu uu qaado “Tallaabba kasta” oo looga hortagayo daandaasiga Armenia.
Maxaa ka cusub goobta dagaalka?
Marka laga soo noqdo dhimashadi Isniintii ay shaaciyeen mas’uuliyiinta gobolka Nagorno-Karabakh, Axaddina waxay ku dhawaaqeeyn iney 16 qof dhinteen dad ka badan 100 dagaalka ay ku dhaawacmeen.
Hay’adda Interfex waxay sheegtay Armeniya dhankeeda iney sheegtay 200 oo muwaaddiniinteeda ah iney ku dhaawacmeen dagaalki ugu dambeeyey. Armeeniya waxay baahisay sawirro ay ku sheegtay dabbaabaad ay ciidamada Azarbajaan lahaayeen oo ay burburisay
Dhanka kale, Azarbajaan waxay sheegtay in laba ka mid ah muwaadiniinteeda la dilay Isniintii ka dib markii shan qof oo hal qoys ka soo wada jeeda la dilay Axaddii. Waxaa kaloo shaacisay in 30 qof oo kale ay dagaalkaasi ay uga dhaawacmeen.
Maamulka Nagorno-Karabakh waxay sheegeen iney ciidamadoodu dib ula wareegeen qaar kamid ah dhulalkii ay xoogagga Azarbajaan qabsadeen maalintii Axada.
Isniintii, dowladda Azerbajaan waxay sheegtay inay qabsatay goobo muhiimad istiraatiijiyadeed u leh gobolka lagu muransan yahay.
Azarbajaan waxay baahisay sawirro ay ku sheegtay dabbaabaad ay Armeniya lahayd oo ay burburisay
Bishii Luulyo, ugu yaraan 16 qof ayaa lagu dilay isku dhacyada xuduudda labada dal ka dhacay, taas oo horseedday bannaanbaxii ugu weynaa ee sanado badan kaddib ka dhaca caasimada Azarbajaan ee Baku, iyada oo ay shacabku dowlada ugu baaqayeen iney qabsato oo ay gabi ahaanba la wareegto gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh.
Caalamka kale sida uu colaaddan uga falceliyey:
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Gutterres wuxuu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay colaadda labada dal ka dhex taagan wuxuuna labada dhinac uu ugu baaqay iney dagaalka joojiyaan
Wasiirka Arimaha Dibada Ruushka wuxuu wadahadallo deg deg ah uu la yeeshay hoggaamiyaasha Armenia iyo Azerbaijan
Faransiiska oo ay ku badan yihiin bulshada Armenia waxay ku baaqday xabad joojin deg deg ah iyo wadahadal
Iran, oo xuduud la leh Azarbajaan iyo Armeniya, waxay sheegtay iney dooneyso labada dal iney dhexdhexaadiso si xal nabadeed loo gaaro
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu Mareykanka uu raadinayo in la joojiyo colaadda ka dhex aloosan Armenia iyo Azarbajaan
Sidoo kale, dhul ballaaran oo ka tirsan dalka Azarbajaanna oo ku teedsan agagaarka gobolkaasina waxaa gacanta ku haya dalka Armeniya. Duqeynta Azarbajaan oo sheegtay burbur u geysatay guryo ku yaal magaalada Armenia ee Martoni
Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka oo si wadajir ah u guddoomiya ururka Amniga iyo Iskaashiga ee kooxda Minsk Yurub, ayaa iskudayaya iney labada dal u kala dab qaadaan si ay colaadda ay u joojiyaan